Dagaallo Dib Uga Qarxay Itoobiya iyo Dowladda Mareykanka Oo Digniin Kasoo Saartay Xaaladda Ammaan Ee Wadankaas [Warbixin].
Sunday August 27, 2017 - 12:39:47 in Wararka by Super Admin
Wadanka Itoobiya xaalad adag oo dhanka ammaanka ah ayaa lagasoo sheegayaa kadib markii ay sii xoogeysteen dagaallada u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan nidaamka Tigreega.
Shaqa joojin guud ayaa looga dhawaaqay magaalooyinka waaweyn oo ay ka socdaan kacdoonada isbedel doonka ah ee lagu doonayo in lagu rido nidaamka kajira magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Waxaa dhaqan galay baaq ka yimid mucaaradka oo ahaa in shaqa joojin 5 maalmood ah la sameeyo si ay qeyb uga noqoto cadaadiska dhanka dhaqaalaha ah ee lasaarayo dowladda Itoobiya.
Wararka ka imaanaya gobolada ay degaan qowmiyadaha Oromada iyo amxaarada ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ku dhaxmarayaan ciidamada melleteriga itoobiya iyo xoogaga hubeysan ee kasoo horjeeda iyadoona meelaha qaar lagasoo sheegayo dibad baxyo ka dhan ah dowladda.
Kooxaha Mucaaradka oo Ciidamada Melleteriga Uga Baaqay in Ay isdhiibaan.
Taliyaha Kooxda Hubeysan ee Jimboot7 ayaa warbaahinta lahadlay wuxuuna sheegay in dagaallo culus ay kula jiraan wax uu ugu yeeray Rajiimka fasaadka oo uu ula jeedo dowladda Itoobiya.
Col. Burhaano Niga ayaa kalimad uu jeediyay ugu baaqay Jeyshka Itoobiya in ay joojiyaan gummaadka ay ku hayaan dadka shacabka ah ee dibad baxyada dhigaya wuxuuna dagaalyahanadiisa ku amray in aysan dilin ciidanka Melleteriga haddii ay isisoo dhiibaan.
Hoggaamiyaha Maleeshiyaadka Amxaarada Jimboot7 ayaa Ciidamada dowlada Itoobiya u fidiyay Cafis balse wuxuu shardi uga dhigay in ay iskusoo dhiibaan dagaalyahanadiisa ayna hubka iska dhigaan, ciidamada kooxaha mucaaradka ayuu kula dardaarmay in aysan dilin askarigii si iskiis ah iskusoo dhiiba kuna dhawaaqa in uu ka baxay dowladda.
Dagaallo goos goos ah ayaa lagasoo sheegayaa duleedyada magaalooyinka Bahardar iyo Dirirdhabe kuwaas oo u dhaxeeya xoogaga mucaaradka iyo ciidamada dowladda, gobolka Oromiya oo kamid ah meelaha ugu daran ee dagaalladu ka socdaan waxaa ka taagan xaalad hubanti la’aan ah sababa la xiriira isgaarsiinta oo go’an waxaana jira xasuuq wadareed ay shacabka ugeysanayaan maleeshiyaadka soomaalida Liyuu Booliska loo yaqaan.
Dhinaca kale dowladaha reer galbeedka ee digniinaha kasoo saaraya xaaladda Itoobiya ayaa sii badanaya, dowladda Mareykanka ayaa markale soo saartay digniin dhanka ammaanka ah oo ku socota muwaadiniinteeda.
Waaxdka socdaalka iyo qunsuliyadaha Mareykanka ayaa digniin cusub oo ay soo saartay ugu baaqday muwaadiniinteeda in aysan ku dhaq dhaqaaqin gudaha Itoobiya sababa la xiriira ammaanka oo aad u xun iyo dagaallada ka socda wadanka oo sii xoogeystay.
Warka kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah muwaadiniinta Americanka ah looga digay in ay usafraan Itoobiya oo lagu sifeeyay in ay kajirto xaalad halis dhanka ammaanka ah, Mareykanku waxay leeyihiin Itoobiya waxaa kajirta qab qabasho sharci darra ah iyo howlgallo raaf ah oo ka dhan ah dadka Rayidka ah.
Warka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga amba qaadayo digniintii kasoo baxday safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa taariikhdu markii ay ku beegneed 13 June,2017 dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ah looga digayo in ay aadaan Itoobiya halka dadka Mareykanka ah ee gudaha ku sugan laga mamnuucay in ay u safraan gobollada Amhara iyo Oromia oo kacdoono iyo dagaallo ka socdaan.
Dowladda Mareykanka waxay sheegaysaa in isku socodka waddooyinka wadanka Itoobiya uusan wanaagsanyn oo dagaallo ka socdaan wadanka islamarkaana meel walba lagu arkayo ciidamo howlgallo ka wada.
Dowladaha Canada iyo Jarmalka ayaa bishaan gudaheeda sidaan oo kale digniino hor leh ugasoo saaray dagaallada sii daba dheeraanaya ee ka socda gobollo badan oo Itoobiya katirsan.